စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ သွင်းဂိုးတွေအတွက်မွေးဖွားလာသူဆိုတာ ဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ပါဘူး
(၈)နှစ်ဆက်တိုက် ဘောလုံးပြက္ခဒိန်တစ်ခုအတွင်း ဂိုး(၄၀)နဲ့အထက် သွင်းယူခဲ့တဲ့ Cristiano Ronaldo
13 Nov 2018 . 3:53 PM
ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့ ပေါ်တူဂီနာမည်ကျော် တိုက်စစ်ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo ဟာ (၈)နှစ်ဆက်တိုက် ဘောလုံးပြက္ခဒိန်တစ်ခုအတွင်း အနည်းဆုံးဂိုး(၄၀)နဲ့အထက် သွင်းယူခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းကောင်းတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမား၊ ပေါ်တူဂီအသင်းရဲ့ သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမား၊ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံး စတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ပိုင်ရှင် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ၂၀၁၀ က စလို့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ (၁)နှစ်အတွင်း ဂိုး(၄၀)နဲ့အထက် သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီကာလအတွင်းမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက် ဂိုးသွင်းအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တာက ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဖြစ်ပြီး (၆၃)ဂိုးအထိ သွင်းယူခဲ့တာပါ။ ဒီရာသီအစမှာ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ရာသီအစပိုင်းတုန်း ဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့ ရုန်းကန်ခဲ့ရပေမယ့် ဆာဆူအိုလိုနဲ့ပွဲမှာ ဂိုးရခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဂိုးတွေ ဆက်တိုက် သွင်းယူခဲ့ပြီး အခုဆိုရင် (၁၅)ပွဲကစား (၉)ဂိုးအထိ သွင်းယူထားပါတယ်။
၂၀၁၈ ၊ နိုဝင်ဘာလအထိ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ (၁)နှစ်အတွင်း သွင်းဂိုးအရေအတွက်က (၄၂)ဂိုးအထိ ရှိနေပါပြီ။ ဒီနှစ်ကုန်အထိ စီရော်နယ်လ်ဒို ဂိုးတွေ ဘယ်လောက် သွင်းယူနိုင်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား . .
Photo:Eleven Sports,Stay Up to date,101greatgoals
(၈)နှဈဆကျတိုကျ ဘောလုံးပွက်ခဒိနျတဈခုအတှငျး ဂိုး(၄၀)နဲ့အထကျ သှငျးယူခဲ့တဲ့ Cristiano Ronaldo
ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့ ပျေါတူဂီနာမညျကြျော တိုကျစဈကစားသမား စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo ဟာ (၈)နှဈဆကျတိုကျ ဘောလုံးပွက်ခဒိနျတဈခုအတှငျး အနညျးဆုံးဂိုး(၄၀)နဲ့အထကျ သှငျးယူခဲ့တဲ့ မှတျတမျးကောငျးတဈခုကို ပိုငျဆိုငျခဲ့ပါတယျ။ ရီးယဲလျအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး ကစားသမား၊ ပျေါတူဂီအသငျးရဲ့ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးကစားသမား၊ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲတဈလြှောကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး စတဲ့ ဂုဏျပုဒျပိုငျရှငျ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ၂၀၁၀ က စလို့ ၂၀၁၈ ခုနှဈအထိ (၁)နှဈအတှငျး ဂိုး(၄၀)နဲ့အထကျ သှငျးယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အဲဒီကာလအတှငျးမှာ စီရျောနယျလျဒိုအတှကျ ဂိုးသှငျးအမြားဆုံးဖွဈခဲ့တာက ၂၀၁၃ ခုနှဈဖွဈပွီး (၆၃)ဂိုးအထိ သှငျးယူခဲ့တာပါ။ ဒီရာသီအစမှာ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကို ပွောငျးရှခေဲ့တဲ့ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ရာသီအစပိုငျးတုနျး ဂိုးသှငျးနိုငျဖို့ ရုနျးကနျခဲ့ရပမေယျ့ ဆာဆူအိုလိုနဲ့ပှဲမှာ ဂိုးရခဲ့ပွီးနောကျပိုငျးမှာတော့ ဂိုးတှေ ဆကျတိုကျ သှငျးယူခဲ့ပွီး အခုဆိုရငျ (၁၅)ပှဲကစား (၉)ဂိုးအထိ သှငျးယူထားပါတယျ။
၂၀၁၈ ၊ နိုဝငျဘာလအထိ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ (၁)နှဈအတှငျး သှငျးဂိုးအရအေတှကျက (၄၂)ဂိုးအထိ ရှိနပေါပွီ။ ဒီနှဈကုနျအထိ စီရျောနယျလျဒို ဂိုးတှေ ဘယျလောကျ သှငျးယူနိုငျမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျလား . .